Shina: Voasambotra Ilay Vehivavy Mahery Fo Tao Ambadik’ilay Fitsoahan’i Chen Guangcheng · Global Voices teny Malagasy
Shina: Voasambotra Ilay Vehivavy Mahery Fo Tao Ambadik'ilay Fitsoahan'i Chen Guangcheng
Voadika ny 09 Mey 2012 2:56 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, Català, English
Tafatsoaka ny Vohitr'i Dongshigu any amin'ny faritanin'i Shangong ihany ilay jamba, Chen Guangcheng, mafàna fo amin'ny zon'ny olom-pirenena , izay teo ambany fanaraha-maso akaiky nandritra ny 20 volana hatramin'ny famoahana azy tany amin'ny fonja ny 8 Septambra 2010. Ankoatra izay, nosamborin'ny mpitandro filaminana tany an-tranony ny Zoma 27 Aprily 2012 teo tany Nanjing i He Peirong (“Pearl”) izay nanampy an'i Chen handositra tany Pékin.
Hatramin'ny Febroary 2011, niezaka hitsidika an'i Chen Guangcheng izay teo ambany fanaraha-maso akaiky i Pearl He raha nanentana ny amin'ny hamotsorana azy. Volana vitsy lasa izay dia nanadihady azy aho momba ny làlana nodiaviny amin'ny maha-mafàna fo azy ho ana tetikasa fikarohana momba ny Miralenta sy ny Maha-olom-pirenena notarihan'ny fikambanana IT for Change. Ity ambany ity ny famintinana an'ilay fanadihadiana tao anaty aterineto:
Iza moa i He Peirong?
Sary famantarana an'i He Peirong ao amin'ny Twitter
Mipetraka any an-tanànan'i Nanjing, faritanin'i Jiangsu i Pearl. Mpampianatra teny Anglisy izy hatramin'ny 2008 rehefa nitranga ilay horohorontany tao Wenchuan. Niala tamin'ny asany izy ary lasa tany Sichuan ho mpirotsaka an-tsitrapo hanampy an'ireo tsy manan-kialofana tamin'io horohorontany io. Volana vitsy taty aoriana, nanomboka nanakantsakana ny hetsik'ireo vondron'olom-pirenena mpanampy ireo tsy manan-kialofana tamin'io loza voajanahary io sy ny famotoran'olom-pirenena mikasika ny fananganana tranobe fampianarana “bean-dreg” ny governemantan'i Sichuan. Mafàna fo maro no voasambotra tamin'izany, isan'ireny i Tan Zuoren sy i Huang Qi. Taorian'izay dia nanapa-kevitra i Pearl ny hiditra anatinà vondrona mafàna fo hanome tohana ho an'ireo gadra politika sy ny fianakavian'izy ireo. Mikasika ny fangatahana tohana ara-bola tao amin'ny Twitter no hetsika fanentanana voalohany nataony tamin'izany. Avy amin'ny alalan'io hetsika fanentanana io, nifandray taminà tambajotran'olona mitovy fisainana aminy midadasika kokoa izy ary taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hanao hetsika fanentanana ho an'i Chen Guangcheng.
Ny Septambra 2011, rehefa nahafantatra fa tsy afaka manatrika fampianarana any an-tsekoly ny zanakavavin'i Chen 6 taona noho ny fanaraha-maso akaiky azy, nanentana ireo mpampiasa aterineto hafa hitsidika ny fianakavian'i Chen any amin'ny vohitr'i Dongshigu izy. In-droa ny tenany no niezaka hiditra ny vohitra nefa nodarohin'ireo jiolahim-boto tao an-toerana. Taorian'ireo ezaka maro tsy nahomby, nanova ny paikadiny amin'ireo hetsika fanentanana ao anaty aterineto amin'ny alalan'ny fanairana ny vahoaka sy izao tontolo izao mikasika ny fepetra iainan'i Chen izy. [Maro ireo mpiondana aterineto no nirotsaka avy hatrany nanolo-tanana tamin'ilay fanentanana hanafahana an'i Chen]. Iray tamin'ireo hetsika fanta-daza indrindra ny “Avotsory i Guangcheng: Sarina Solomaso mainty“nataon'i Hexie Farm :
Tsy narian'i Pearl mihitsy ilay hevitra hanala an'i Chen ao amin'io vohitra io. Ankehitriny dia afaka i Guangcheng ary niresaka tamin'izao tontolo izao momba ilay fisamborana tsy ara-dalàna nataon'ny governemanta tao an-toerana any amin'ny “comté” an'i Linyi, faritani'i Shandong
Kanefa, nanjavona i Pearl hatramin'ny 27 Aprily, fotoana fohy taorian'ny niparitahan'ny vaovao milaza ny fitsoahan'i Guangcheng nanerana ny Aterineto. Momba ny fiarovana ny rahalahin'i Guangcheng ny bitsiny farany [zh] :
@pearlher: Misy namana mipetraka manodidina an'i Shandong ve? Miangavy anareo handeha any amin'ny làlambe 205 ary hijery an'i Kegui [rahalahin'i Chen Guangcheng]. Tohano izy, miangavy anareo hanampy azy. Tsy afaka miala ny tranoko intsony aho, raha tsy izany dia izaho mihitsy no nankany.
Fanentanana ho famotsorana an'i Pearl
Manoloana ny fanamarinana mikasika ny fisamboran'ny China Aid an'i Pearl, nipoitra ireo bitsika Shinoa manentana ny hamotsorana azy. Poon Siu To, mpanentana anatin'ny radio any Hong Kong, nidradradradra [zh] hoe:
Manomboka androany, tadidio ity mpamonjin'i Nanjing ity, “Pearl” no anarany, He Peirong. Nanao sorona ny tenany hamonjy an'i Chen Guangcheng izy. Mpitolona mafàna fo sy manana ny hambony izy. Avereno aminay i Pearl, avereno i Pearl mahafatifatinay! (Miangavy anao hanaparitaka izany)
Zeng Jinyan, izay nihaona tamin'i Chen Guangcheng ny vadiny Hu Jia mikasika ny fitsoahany, dia nitaraina [zh] ihany koa:
Fitakiana: 1. Ny famoahana an'i He Peirong @pearlher; 2. Ny famotsorana ny vadin'i Chen Guangcheng, ny zanakavaviny, ny reniny, ny fianakavian-drahalahiny sy ireo mponina; 3. Fanomezan-toky fa halalaka ny fianakavian'i Chen Guangcheng amin'ny hoavy; 4. Fanajanonana ny fanaovana antsojay sy ny fanenjehana ireo mpiaro ny zo sy ny fianakavian'izy ireo ; 5. Tokony hiatrika fitsarana ireo manam-boninahitra sy dahalo nandray anjara tamin'ilay fanenjehana tsy ara-dalàna.
Ny hevitra fonosin'ilay fitsoahan'i Chen ny fonja
Mamintina [zh] ny hevitra fonosin'ilay hetsika fitsoahan'i Chen sy ireo mpanohana azy ilay mafàna fo malaza amin'ny lahatsary sady mpampianatra, Ai Xiaoming:
Fitsoahana fonja mampihorohoro ny famakiana ny vavahadin'ny helo sy ny fakàna an'i Chen Guangcheng hiala tao. Tsy ny toerana hita maso fotsiny ny fonja fa any anatin'ny fon'ny vahoaka. Ahoana ny fomba ahafahan'ny devoly mihetsika malalaka toy izao? Tsy avy any amin'ny rafitra fotsiny ihany ny olana fa avy any amin'ny fahanginan'ny vahoaka ihany koa. Nandrava izany fahanginana izany ny hetsika fanentanana hamoahana an'i Chen Guangcheng. Mila hetsika mahery vaika tahaka izany ny fitsoahana lavorary. Mipoitra avy amin'ny fampiharantsika ny fahalalahana ny fahasahiana; ny fahendrena, ny ezaka iraisana sy ny fandaminana dia vokatry ny fitohitohizan'ireo dingana izay mandingana ny tahotsika. Vokatry ny herim-po sy ny faharetan'i Pearl sy i Yushan ny fahafahan'i Chen. Eo amin'ny fara-tampon'ny ady handresena ny tahotra sy ny fampihorohoroana ireo vahoaka nitsidika ny vohitr'i Dongshigu sy voadarok'ireo jiolahim-boto tany an-toerana. Raha teo aloha ireo maro tsy niloa-bava nanome antoka tao amin'ny Twitter na nampiseho niharihary ireo sarinà solomaso fiarovana amin'ny masoandro, ankehitriny kosa dia nifanome tànana izy ireo hiaro ny hatsarana. Tsy afaka manitatra ny fahefany mankany amin'ny fanahin'ny vahoaka ny famoretana feno herisetra. Na lasibatry ny fampanginana foana aza ny fahamarinana, manam-petra ny heriny. Tahaka ilay voalazan'i Pearl tao amin'ny Google Plus: Ny hetsika manan-danja indrindra dia ny fitenenan'ny vahoaka.